မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်၏ ရည်ရွယ်ချက် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
25-03-2007, 04:30 AM
မိမိတို့ ဤဖိုရမ်ကို တည်ထောင်ရခြင်း၏ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ "ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်များကို အစိမ်း သက်သက် ဖြစ်နေသေးသော ၊ စတင်သင်ယူ လေ့လာခါစ ဖြစ်သော မြန်မာ
လူငယ်များအား ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော စကားလုံးများ အသုံးပြုပြီး အဆင့်မြင့်စွာ သိနားလည်
အောင် ရှင်းလင်းပြောပြရန် "သာဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ မြင့်မားသော ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်များကို ကောင်းစွာ တတ်ကျွမ်း နားလည်ပြီးဖြစ်ကြသော အကို ၊ အစ်မ တို့မှ မျိုးဆက်သစ် ညီငယ် ၊ ညီမငယ် လေးများကို ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ အဆင့်မြင့်စွာ သိနားလည်ကြစေရန် ပို.စ် တစ်ခုမျှပင်ဖြစ်စေ ၊ တော့ပစ် တစ်ခုမျှပင်ဖြစ်စေ ကူညီပံ့ပိုးကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ မိမိတို့သည် ပြင်ပလောကတွင် ထိတွေ့ဆက်ဆံဖူးခြင်း မရှိစေကာမူ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း မိမိတို.
လူမျိုး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အုတ်တချပ် ၊ သဲတစ်ပွင့် မျှလောက်ဖြစ်စေကာမူ ဆောင်ရွက် ပေးချင်ပါသည်။ မိမိတို့ မြန်မာလူမျိုး များအားလည်း တခြားနိုင်ငံသားများ သိသလောက်
သိနားလည် စေချင်ပါသည်။ ဤစေတနာဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ယခုဖိုရမ်ကို တည်ထောင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တွင် ငါသိသည် ၊ ငါတတ်သည် ဆိုသော မာနမျိုးများ လုံးဝမရှိပါ။သင်ယူ လေ့လာနေကြသူများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ညီအကို မောင်နှမ များမှလည်း တဦးနှင့်တဦး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ပညာဒါနပြုကြပါရန် ၊
ပညာဖလှယ်ကြပါရန် စေတနာအရင်းခံဖြင့် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 95 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, ကိုစံငြိမ်း, ကိုဖိုးအေး, ကိုရဲလင်းထွန်း, ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, စိုးမင်းသူမောင်, စနိုးလေး, ဆွိ, ဇာနည်စိုး, ညီညီသစ်, ပုဂံသူ, ဖိုးထိန်, ယွန်းယွန်း, ရှင်းသန့်, သက်နိုင်, သမီးလတ်, သူရကျော်ထားဝယ်, ဟန်ဇော်ထက်, အမောင်, အနိုင်းမဲ့, ဦးဝဏအောင်,ုကိုစော, ကောင်းရြဲ့ဖူလေး, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, စောထွန်းဝေ, ဆေတ, ဇောတိ, ဇော်ရဲပိုင်, ဇော်သိုက်, နေမျိုးဝင်း, မေထူးမောင်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်မျိုးသာ, မောင်ရှိန်း, မောင်သံသရာ, ယောနသံ, သောကမဲ့မိုးတိမ်, အောင်လံလေး, ဝေယံ, ပြည့်ဖြိုးကိုကို, မြတ်သူအောင်, ၀တ်မှုံ, ၀လုံး, ဖြိုးယံလေး, ဖြိုးကောင်းကင်, ကြည်သာ, နိုးတူး, နှင်း, arkaraung, Atun, Aung Aung, Aung Naing Win, cherry, donor, Dragon Ball, Hla Myo Thein, htun30, ittechniquelearner, kaung kin lu, khinswewin, ko myo, ko ye, kyaukphyu, Kyaw Zin Hein, kyaw zin myat, kyawkyi1988, kyawsoeag, kyawtoe, may thandar oo, Mg Kyaw Zin Hein, minthumon, mjkomg012@gmail.com, moe san dar, moekyal, moemama2008, mohmoh, mr.vampire, naybala, ninimar, phoetharlay, posaip, Sai Nok Kham, sakuranbo, shweyaminaung, Starfire, thureinsoe, tu tu, unlimited, Venom, winkyway, yewinnaing, zawminn12, zo
it'sagood idea.. thz :)
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ komyo81 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မေထူးမောင်, မောင်သံသရာ, နှင်း, Atun, Ko LayMyo, Kyaw Zin Hein, minthumon, moe san dar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ zthet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, နှင်း, Atun, khinswewin, minthumon, moe san dar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
Re: The Aim Of Our Forum
Last edited by ဂျစ်တူး; 22-05-2007 at 03:02 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, အနိုင်းမဲ့, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, နှင်း, ittechniquelearner, may thandar oo, minthumon, moe san dar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
ဖြန့်ဝေရမှာပေါ့ ကိုရဲနောင်ရေ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ကို ဒါနပြုမှာပါ။ ကျနော်တို့ ဒီ Field ကိုစရောက်ကာစက သေသေချာချာတတ်တဲ့သူကလည်းမရှိ၊ Resourse ကလည်းနည်းနဲ့ တစ်ခုခုမသိရင် အဲဒီမသိတာဟာ တော်တော်ကြာတယ်ဗျ။ ဒီကြားထဲ ပညာပြည့်ပေမယ့်၊ သဘောထားမပြည့်သူတွေရဲ့ နှိပ်စက်ညှည်းပန်းမှုကိုလည်း တော်တော်ကို ခံစားဖူးပါတယ်ဗျာ။ (ဒါပေမယ့် အခုချိန် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျို့။ ဒီနေ့အထိသိသမျှ သူတို့ကျေးဇူးလည်း မကင်းလှဘူး။) အခုတော့ ဒီဒုက္ခတွေ တော်တော်နည်းသွားပါပြီ။ Ebooks တွေ၊ Learning Media တွေ၊ နောက်ပြီး ကိုရဲနောင်တို့လိုလူမျိုးတွေ လက်တစ်ကမ်းမှာတင် ရှိနေတာ ကျနော်တို့အတွက် ကံကောင်းတာပါပဲ။ ကျနော်လည်း သိသမျှ၊ မေးသမျှ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပါမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ ကိုပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, လူမုန်းနဒီ, အနိုင်းမဲ့, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, စောထွန်းဝေ, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, နှင်း, arkaraung, Aung Aung, ko ye, Kyaw Zin Hein, minthumon, moe san dar, ninimar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
ခင်မေလေး, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, အနိုင်းမဲ့, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, နှင်း, minthumon, mjkomg012@gmail.com, moe san dar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ... တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးပါ... ဒါမှလည်း အကုန်လုး တိုးတက်လာမှာပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ Saturngod အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေလေး, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, အနိုင်းမဲ့, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, သောကမဲ့မိုးတိမ်, နှင်း, ittechniquelearner, minthumon, moe san dar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
26-05-2007, 04:49 AM
မိမိတို့ ဤဖိုရမ်ကို တည်ထောင်ရခြင်း၏ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ "ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်များကို အစိမ်းသက်သက် ဖြစ်နေသေးသော ၊ စတင်သင်ယူ လေ့လာခါစ ဖြစ်သော မြန်မာလူငယ်များအား ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော စကားလုံးများ အသုံးပြုပြီး အဆင့်မြင့်စွာ သိနားလည် အောင် ရှင်းလင်းပြောပြရန် သာဖြစ်ပါသည် . . . .
. . . အကို ၊ အစ်မ တို့မှ မျိုးဆက်သစ် ညီငယ် ၊ ညီမငယ် လေးများကို ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ အဆင့်မြင့်စွာ သိနားလည်ကြစေရန် ပို.စ် တစ်ခုမျှပင်ဖြစ်စေ ၊ တော့ပစ် တစ်ခုမျှပင်ဖြစ်စေ ကူညီပံ့ပိုးကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ . . . မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း မိမိတို.
လူမျိုး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အုတ်တချပ် ၊ သဲတစ်ပွင့်မျှလောက်ဖြစ်စေကာမူ ဆောင်ရွက်ပေးချင်ပါသည်။ မိမိတို့ မြန်မာလူမျိုးများအားလည်း တခြားနိုင်ငံသားများ သိသလောက်
သိနားလည်စေချင်ပါသည်။ ဤစေတနာဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ယခုဖိုရမ်ကို တည်ထောင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တွင် ငါသိသည် ၊ ငါတတ်သည် ဆိုသော မာနမျိုးများ လုံးဝမရှိပါ။သင်ယူ လေ့လာနေကြသူများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ညီအကိုမောင်နှမ များမှလည်း တဦးနှင့်တဦး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ပညာဒါနပြုကြပါရန် ၊
စေတနာကိုလေးစား အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ကိုရဲနောင်ရေ .
မြန်မာပြည်က အင်တာနက်သုံးတဲ့လူငယ်တွေက Zorpia, Frster, Multiply စတဲ့ Social Web Site တွေမှာပဲ အချိန်ကုန်နေတာတွေ့ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ . . ဒီနေရာအကြောင်းကို
သိတာနောက်ကျလို့ အခုမှ ရောက်လာတာပါဗျာ . .
သိထားသလောက်တော့ share လုပ်ပါ့မယ် . .
ကျနော့် ဘလော့လေးမှာ Link ချိတ်ခွင့်ပြုပါလို့ ထပ်ပြီးခွင့်တောင်းပါရစေဗျာ. .
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, လူမုန်းနဒီ, အဖွားကြီး, အနိုင်းမဲ့, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, Aung Aung, minthumon, moe san dar, ninimar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
26-05-2007, 05:21 AM
Re: နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ဗျာ. .
ခွင့်တောင်းဖို့မလိုပါဘူး ငါ့ညီ။ ပညာဖြန့်ဝေပေးတာမှာ မူပိုင်မရှိဘူး။ ဘယ်လို ဖြန့်ဝေဖြန့်ဝေ တဘက်သား ပညာရဖို့ပါပဲ။ ချိတ်စေဗျာ။ ဒါနဲ့ ညီလေး ဘလော့က ဘယ်မတုန်း။ ဒီဖိုရမ်က အသင်းဝင်တွေလဲ သိသွားအောင် ညီလေးဘလော့ လိပ်စာကို ပို့စ်တွေမှာ တင်ထားလိုက်ပါ။ သူတို့လည်း လာလည်လို့ ရတာပေါ့။ အကိုက မြန်မာလူငယ်တွေကို Chat,Dating Site တွေကနေဆွဲထုတ်ချင်တယ်။ အမှန်ပြောရရင် အကို့ဆိုဒ်ကတောင် Mystery Zillion ဖိုရမ်လောက်မကောင်းပါဘူး။ အဲဆိုဒ်လေးကမှ အမှန်တကယ် အကျိုးရှိတဲ့ ဆိုဒ်လေးပဲ။ ဒါကြောင့် အကိုအဲမှာပါ လာကူတာပေါ့။ ဒီမှာလည်း ကွန်ပျူတာကို အဓိကထားတာပါပဲ။ သို့သော်လည်း မြန်မာလူငယ် အများစုက မတတ်တာကိုလေ့လာမယ်မစဉ်းစားဘူး။ မတတ်ဘူးဆိုပြီး ပစ်ထားလိုက်တော့ကာ သိပ်ခက်တာပဲ။ အားမရဘူး။ တို့က ဆွဲဆောင်ရမှာပေါ့။ ငါ့ညီကို ကြိုဆိုပါတယ်။ မိတ်ဆက်ကြမယ်ထဲမှာ သွားမိတ်ဆက်လိုက်ပါဦး။ ကျန်တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေလဲ ကြိုဆိုကြမှာပါ။
Last edited by Ye Naung; 26-05-2007 at 05:23 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရဲလင်းထွန်း, ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, အနိုင်းမဲ့, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, နှင်း, cherry, ittechniquelearner, ko myo, ko ye, minthumon, moe san dar, ninimar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
26-05-2007, 05:44 AM
ကျေးဇူးဘဲအကိုရေ လင့်ချိတ်ခွင့်ပေးတာရော . . ကြိုဆိုတဲ့ အတွက်ရောပေါ့ဗျာ . .
ကျွန်တော့် ဘလော့လေးရဲ့ လိပ်စာက ကျွန်တော့် Signature မှာလင့်ခ် ချိတ်ထားပြီးသားပါအစ်ကိုရေ
မြန်မာစာနဲ့Blockတွေများလာပေမယ့် ဘာသာရေးဘက်မှာအားနည်းနေတယ်လို့ထင်မိပါတယ် . .
အဲဒီကွက်လပ်လေးကို နိုင်သလောက်ဖြည့်ကြည့်တာပါ . .
Internet မှာ Free ပေးထားသမျှရသလောက်သုံးပြီးကြိုးစားထားပါတယ် . .
လောလောဆယ်တော့ Online Dhamma တရားနာလို့ရနေပါပြီ . .Online Music နားထောင် လို့ ရနေ ပါပြီ . မကြာခင် Online Dhamma VCD လာတော့မှာပါ . .
အစက ၀င်းအင်းဝနဲ့ လုပ်ထားတာ မနေ့ကပဲ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ဇော်ဂျီ font ပြောင်းလိုက်ပါတယ် . .လာကြည့်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး တစ်ခုခုရသွားအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထားပါတယ် . . အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ . .
အကြံကောင်းလေးများရှိရင်လည်းပေးကြပါခင်ဗျား . .
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရဲလင်းထွန်း, ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, အနိုင်းမဲ့, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, နှင်း, cherry, ittechniquelearner, minthumon, moe san dar, ninimar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေလေး, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, လူမုန်းနဒီ, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, နှင်း, minthumon, moe san dar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
26-05-2007, 07:27 PM
Chatting အရမ်းဝင်တာ ကျွန်တော်လည်း အားမပေးဘူး။ ဒီဖိုရမ် ကလူတွေတော့ Chatting သိပ်မ၀င်ကြဘူး ထင်တာဘဲ။ မယုံရင် ဖိုရမ် ရဲ့ Chat Room သွားကြည့် ပါလား။
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, လူမုန်းနဒီ, အနိုင်းမဲ့, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, မြတ်သူခန့်, နှင်း, minthumon, moe san dar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
ယုံပါတယ် ဒါပေမယ့် သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, စနိုးလေး, ဆွိ, ယွန်းယွန်း, လူမုန်းနဒီ, အနိုင်းမဲ့, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မြတ်သူခန့်, နှင်း, minthumon, moe san dar, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo
စေတနာကိုလေးစားအသိအမှတ်ပြုပါတယ် ကိုရဲရေ ကိုထွဋ်တို့ဆိုဒီကိုရောက်မှကွန်ပြူတာကိုင်ဘူးတယ်
Last edited by ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an); 24-06-2007 at 07:48 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 21 ဦးတို့မှ thureinhtut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, စနိုးလေး, ဆွိ, ဖိုးထိန်, ယွန်းယွန်း, လူမုန်းနဒီ, အနိုင်းမဲ့, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, မြတ်သူခန့်, နှင်း, cherry, Ko LayMyo, minthumon, moe san dar, ninimar, phoetharlay, Sai Nok Kham, sakuranbo, zo